Jijjiiramaa - LibreOffice Help
Dirreewwan gegeedaramaan qabiiyyee kanaatii galmee keetti akka ida'attu sidandeesiisu. Fakkeenyaaf, lakkaawwii fuulaa deebistee qindeessuudhaaf, gegeeddaramaa tokko fayyadamuu dandeessa.
Saagi - Dirreewwan - Kabiroo - Jijjiiramoota caancala jedhu filadhu
Dirreewwan hiika fayyadamaa galmee ammaa qofa keessatti argamu.
10 Lakkaawwii boqonnaa
Jijjiiramaa Qindeessi Gegeedaramaa tokkoo fi gatii isaa murteessa. Gatii gegeedaramaa tokko fuldurra dirree gegeeddaramichaa cuqaasuu, itti aansiitee Gulaalii - Dirree filachuudhaan, jijjiiruu nidandeessa.
Jijjiiramaa Mul'isi Gatii ammaa kan gegeeddaramaa isa ati tarreeFilannoo keessatti cuqaaste sanaa saaga.
Dirree DDE Geessituu DDE, isa ati yeroo fedha keetti karraa maqaa ramadameefiitiin harroomsuu dandeessu sanaa, galmee kee keessatti saaga.
Foormulaa Saagi Lakkoofsa dhabaataa, yk bu'aa foormulaa tokkoo saaga.
Dirree naqaa Gegeedaramaa yk Dirree Fayyadammaa tokkoof gatii haaraa saaga.
Gatiin gegeedaramaa dirree Naqaa tokko bakka dirren itti saagamee kaasee gara fulduraatti qofa gatii qabaata. Yeroo birroo, galmee keessatti gatii gegeedaramaa jijjiiruuf, dirree Naqaa maqaan sanuuma, garuu gatiin adda tahe tokko saagi. Haa tahu malee, gatiin Dirree Fayyadammaa tokko haala xurgbee(Adunyaa mara) tiin jijjiirama.
Gegeedaramaawwanii dirree Filannoo keessatti mul'atu. Yammuu qabduu Saagii cuqaastu, qaaqa Dirree Naqaa jedhu, bakka ati gatii haaraa yk barruu dabalataa, akka shutamaatti, galchuu dandeessutu argama.
Hangii lakkoofsaa Lakkaawwii ofumaa gabateewwan, saxaatoo, yk goodayyaawwan barruutiif saaga.
Gegeedaramaa fuulaa qindeessi galmicha keessaa qixa wabii, bakka itti lakkaawumsa fuulaa debi'ee lamka'u saaga. Qixa wabii jiraachisuuf "Banaa", dhabamsiisuuf ammoo, "Dhaammaa" filadhu. Akkasuumas lakkaawumsa fuulaa lakkoofsa biraatti eegaluuf iddoodaa galchuu nidandeessa.
Gegeedaramaa fuulaa qindeessi Lakkoofsa fuulawwanii, qixa wabii "Gegeedaramaa fuulaa qindeessii" irraa gara dirree kanaatti agarsiisa.
Dirree Fayyadamaa Gegeeddaramaa xurgbee maamiloo tokko saaga. Dirree Fayyadamaa, akka hima otoolaa tokkoof gegeeddaramaa murteessutti fayyadamuu dandeessa. Yeroo Dirree Fayyadamaa jijjiirtu, akka-fakkiin gegeeddaramticha martii galmee keessaa niharoomu.
Dirree filatametti dhangii fayyadamuuf barbaaddu cuqaasi, ykn dhangii maamiloo hiikuuf, "Dhangiiwwan dabalataa" cuqaasi.
Dirreewwan hiika-fayyadamaatiif dhangii maamiloo tokko murteessuuf, dhangii isa tarree Dhangi'i jedhu keessatti hojummeessuu barbaaddu cuqaasi, yk "Dhangiiwwan Dabaalataa" jedhu cuqaasi.
Maqaa dirree hiika fayyadamaa isa uumuu barbaaddu, barreessi. Galtee qindeessuuf, tarree Akaakuu keessaa "Wabii Qindeessii" cuqaasiitii, kana booda, sanduuqa keessatti maqiicha barreessiitii, Saagi filadhu. Wabii galtee haaraaf, tarree maqaa galtee keessaa Filaannoo cuqaasi.
Dirreewwan hiika fayyadamaatti, qabeentoota idaa'uuf barbaadduu galchi.
Tarree Format keessatti, gatiin akka barruu yk lakkoofsa tokkotti saagame qindeessa.
Dirreewwan jiraan kan Akaakuu dirree tarree Akaakuu keessatti filatamee tarreessa. Dirree saaguuf, dirricha cuqaasitii, kana booda, Saagicuqaasi.
Dirree tokko tarricha irraa battalaan saaguuf, Ctrlgad dhibuun dirricha lama cuqaasi.
Galmee HTML tokkoo keessatti, dirreewwan dabalataa lama, akaakuu dirree "Gegeedaramaa qindeessii": HTML_BANAA fi HTML_DHAAMAA jedhamaniif, ni jiraatu. Yeroo faayilichi, dirqalaa ati filatte irratti hundaa'uun, akka galmee HTML tokkootti ol-kaa'amu, barruun ati sanduuqa Gatiii keessatti barreessitu, gara banamuu iyyaatoo HTML iyyaatoo (<Value>) yk gara cufamuu iyyaatoo HTML (</Value>) itti jijjiirama.
Uttuu qabduu Ctrl gaddi dhibdee jirtu, yk gegeeddarama barbaaddu filattee, kabalaa iddoo dhibdee, galfaticha irra lama-cuqaastee, galfatichii akkumaa sanaan galmee kee keessatti saagama.
Dirqalii kun kan jirachuu dandaa'u, yoo akaakuun dirree "Formulaa Saagi" filatamee qofa.
Barruu isa dirricha keessatti muli'suu barbaaddu barreeessi.Yoo dirre iddooqaa saaguuf deemte, yeroo qarree antuutee dirricha irra keessu, barruu isa akka qaccee gargaarsaatti muli'suuf barbaaddu barreessi.
Dirree lakkoofsaa fuulatti gatii iddoodaa isa fayyadamuuf barbaaddu saagi, fakkeenyaaf, "+1".
Qabeentoota dirree galmee keessaa dhoksa. Dirrichi akka mallattoo ajaja qalootti galmee keessatti saagama. Dirqalii kun kan jirachuu dandaa'u, yoo akaakuuwwanii dirree "Gegeeddarama Qindeessi" fi "Dirree Fayyadamaa" tiif qofa.
Lakkoofsoota boqonnaa haaromsuuf, filannoo qinddeessa.
Iddoo itti galmee kee keessatti lakkaawwii lamkaastu, mataduree yk sadarkaa boqonnaa filadhu.
Arfii isa mataduree yk sadarkaa boqonnaa giddu akka foo'aatti fayadamuuf barbaaddu barreessi.
Tarree Filannootti dirree hiika-fayyadamaa ida'a.
Tarree filannoo irraa dirree hiika-fayyadamaa haqa. dirreewwan galmee ammaa keessatti itti hinfayyadamne qofaa haqu nidandeessa. Tarree keessaa, dirree isa galmee ammaa keessatti itti fayyadamaa jirtu haquuf, jalqaba, dirree wara galmee keessaa wal-fakkatan mara haqi, kana booda, tarree irraa haqi.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=Writer/Variables/om&oldid=1572580"
This page was last edited 07:45:34, 2016-06-20 by LibreOffice Help user .